Kala-duwanaanta, Sinnaanta iyo Ka-mid-ahaanshaha Wararka - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
La soco dhammaan dadaallada Kala-duwanaanta, Sinnaanta iyo Ka-mid noqoshada iyo wararka sheekooyinka hoose. Ama fiiri joornaalkayaga 'DEI', We R All In.
Raadinta Codkooda: Ardayda Dugsiga Sare ee Degmadda oo Dhan waxay kaqaybqaataan Kasocodka Nabadda
Abriil 21 2021
Dadaal loogu jiro "u istaagida midnimada ka soo horjeedda cadaalad darada midab-takoorka," aqoonyahanada degmada oo dhan waxay kaqeybqaateen nabad-galyo, arday ay socodsiisay arbacadii 19-kii Abriil, kuna biiraya ardayda ay isku fasalka yihiin ee ka kala socda degmooyinka ku teedsan magaalooyinka mataanaha ah.
Toddobaadka Dunida: Aragtida Asaliga ah ee Deegaankayaga
Waa Toddobaadka Dhulka , toddobaadkiina oo dhan, shaqaalaha Waxbarashada Hindida ee Robbinsdale waxay soo bandhigayaan dhacdooyin taxane ah oo u kuur galaya aragtiyaha asaliga ah ee deegaankeenna, laba dhacdo oo dheeri ahna waxaa loo dhigay Arbacada iyo Khamiista.
Masraxa Caruurta ee Minnesota wuxuu soo bandhigayaa Wax Ka Dhacay Magaaladeena
Tiyaatarka Caruurta ee Minesota wuxuu soo saaray akhris dhijitaal ah oo dijitaal ah oo ah Wax Ka Dhacay Magaaladeena , kaas oo raacaya laba qoys - mid Cadaan ah, mid Madow ah - iyagoo ka wada hadlaya toogashada booliska ee nin Madow ah oo ka dhacay beeshooda.
Ardayda Armstrong waxay wareystaan Hogaamiyaasha Madoow ee Beesha
Ardayda dhigata Dugsiga Sare ee Armstrong waxay kaqeybqaateen fursad waxbarasho oo ugub ah bishii Febraayo iyagoo abuuray taxane fiidiyow ah oo ay ardaydu ku wareysanayeen hoggaamiyeyaasha bulshada Madow.
Barnaamijka Waxbarashada Hindida Mareykanka: Fasalka Luqadda Ojibwe
Bishii Febraayo ee la soo dhaafay, Barnaamijka Waxbarashada Hindida Mareykanka ee Robbinsdale wuxuu bilaabay inuu bixiyo fasalo luuqadda Ojibwe oo bilaash ah ardayda degmada, qoysaska iyo martida. Barnaamijku wuxuu soo xirmay bishan, si guul ahna wuu ku dhammaaday, qabanqaabiyeyaashu waxay qorsheynayaan inay soo celiyaan sanadka soo socda.
Abriil 22 Sinnaanta Dhacdada Waxbarashada Dib loo dhigay
Dhacdooyinka Dugsiyada Robbinsdale ee Dugsiga 22 Abriil ee Sinaanta Waxbarashada ayaa dib loo dhigay iyadoo aan la soconno dhacdooyinka saameynta ku leh bulshadayada.
Kheyraadka iyo Xiriirinta Abriil 21, 2021
Kheyraadka bishan waxaa ka mid ah: Abriil waa Bisha Dhaxalka Caalamiga ah; Faahfaahinta ku saabsan deeq loo fidiyo ardayda dhigata dugsiga sare ee Jaamacadda Minnesota oo la yiraahdo Hogaamiyaasha soo baxaya ee midabka Barnaamijka; iyo xiriiro kooban oo mawduucyo leh sheekooyin iyo ilo.
Ku soo dhawow Robbinsdale Soo Saarkiisa Daahfurka ee Wargeyskeena 'DEI', 'Dhamaanteen Waannu Wada Jirnaa'
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay qabanayaan shaqo badan xagga sinnaanta, kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada. Hadafkeenu wuxuu noqon doonaa in aan wadaagno shaqada ka socota dugsiyadeena, in aan siino ilo waxtar leh iyo xiriiriyeyaal wadahadal fekerka kiciya iyo in aan muujino ardayda iyo shaqaalaha maadaama ay gacan ka geysanayaan dhaqaajinta shaqadan.